ज्यालामा लैङ्गिक विभेद कायमै ! – इन्सेक
ज्यालामा लैङ्गिक विभेद कायमै !
ताप्लेजुङ ०७६ असार २७ गते
संविधानको भाग–३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १८ मा समानताको हक अन्तर्गत (उपधारा ४) मा समान कामका लागि लिङ्गका आधारमा पारिश्रामिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यद्यपी जिल्लामा लैङ्गिक आधारमा ज्यालामा विभेद कायमै रहेको पाइएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा पुरूष र महिलाबीच ज्याला विभेद कायम छ । समान काम तर असमान ज्याला अझै हट्न सकेको छैन । खेतबारीदेखि कन्ट्रक्सनका काममा समेत ज्याला समान छैन । असारको उखरमाउलो गर्मी । क्षणभरमै दर्किने पानी । घामपानी छल्नका लागि कोदोको ब्याडमै घोचासँगै गाडिएको छाता । तल्लो/माथिल्लो गरामात्रै होइन, गाउँभरिका खेतबारीमा कतै कोदो त कतै धान रोप्न व्यस्त । मानो खाएर मुरी उब्जाउने असार महिना भएर होला, दिनको समय गाउँघर सुनसान छन् । खेतबारीमा बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म व्यस्त देखिन्छन् ।
धानको बेर्ना जति उखेल्दै गयो, उति अगाडी गाड्छन छाता । फुङलिङ नगरपालिका–९ की ५५ वर्षीया दिलमाया घतानी कोदोको बेर्ना उखेल्दै, छातासँगै बाँधिएको घोचा अघि बढाउँछिन् । आफ्नो घरवारीमा कोदो रोपी सकेर उनी अर्काकोमा ज्यालामा काम गर्छिन् । गाउँघरमा मौसम अनुसार काम पाइन्छ ।
असारमा धान र कोदो रोप्ने काम गरेबापत दिनभरको ज्याला २ सय ५० रुपियाँ पाउने गरेको घतानीले बताइन् । उनले भनिन्–“यही काम उत्तिनै समय पुरूषले गर्दा ५ सय रुपियाँ ज्याला पाउँछन् । तर, महिलाले आधा मात्र पाउँछन् ।”
फुङलिङ नगरपालिका–४ की दावाफुटी शेर्पा गुरुङले पनि ज्यालामा पुरूषले पाउने ज्यालाको आधा मात्र पाउने गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्–“काम अनुसारको ज्याला फरक हुन्छ । हामी छोरी मान्छेले उही काम गरेपनि पुरूषले पाएको ज्यालाको आधामात्र पाउँछौ ।”
पति कुमार गुरुङले पत्नीको ठीक दोब्बर ज्याला पाउँछन् । फुर्सदमा घरनजिकै गिट्टी कुट्दै गरेका पति–पत्नीद्वयका अनुसार काम गराईमा फरक नभएपनि ज्यालामा फरक गर्दा पीडा हुन्छ ।
फुङलिङ नगरपालिका–७ की कृष्णमाया बिक ६१ वर्ष पुगिन् । धान, कोदो रोप्नदेखि बेला मौका स्थानीयस्तरमा आयोजनाको काम गर्छिन् ।
यतिका वर्षसम्म पुरूष सरह ज्याला पाएको उनलाई थाहा छैन । बिकले भनिन्–“तुलनात्मक रूपमा पुरुषले जति महिलाले काम गर्न सक्दैनन् । सायद त्यही भएर होला कम ज्याला दिन्छन् ।” तर पनि उत्तिकै समय, उही काम तर ज्याला कम हुँदा चित्त दुख्ने गरेको उनको भनाई छ ।
ज्यालामा गएपछि तोकिएको समय पसिना बगाउनैपर्छ । काम गरेको दिन मौसमले साथ नदिए भोलिपल्ट पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
फुङलिङ नगरपालिका–५ का डम्बर माबो लिम्बु घर बनाउने राजमिस्त्रीको काम गर्छन् । ५० वर्षीय लिम्बुले घरको ठेक्कापट्टा लिएर काम गर्छन् । कामदार पनि लगाँउछन् ।
घर निर्माणमा महिला कामदार न्यून हुन्छन् । उनले भने–“काम अनुसारको दाम हुन्छ । पुरूषले जसरी काम गर्न सक्दैनन् ।”
फुङलिङ नगरपालिका–८ का ठेकेदार डम्बर लिम्बुका अनुसार पुरूष र महिलाले एउटै काम समान समय दिएर गरेपनि ज्याला कम दिने चलन छ । लिम्बुले भने–“परम्परादेखि नै प्रायले कम ज्याला दिन्छन् ।”
खेतबारीको कामदेखि ठूला आयोजनाको काममा महिला कामदार ज्यालामा ठगिएका छन् । मानव अधिकारकर्मी शान्ता आङवुहाङले महिला भएकै कारणले ज्यालामा विभेद हुन नहुने बताइन् ।
उनले भनिन्–“संविधान, कानुनमा सबै समान छन् । तर, व्यवहारमा असमानता यथावत छ ।” पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङ शाखा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले ज्याला बहस सैद्धान्तिक रूपमा भए अनुसारको व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको अनुभव सुनाए ।
शहरदेखि गाउँसम्म महिला कामदारले उचित ज्याला पाएका छैनन् । समान कामको समान ज्याला जनचेतनामुलक अभियान, अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कार्यालयले बढी अग्रसरता लिनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीका अनुसार ज्याला विभेद बारे प्रशासनमा कुनै उजुरी आएको छैन । उद्यपि ज्याला विभेदको समस्याले समाजमा जरा गाडेको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
प्रजिअ भण्डारीले भने–“कार्यान्वय हुनुपर्छ । यदि कार्यान्वयन नगरेको उजुरी आए कानुन बमोजिम अघि बढ्छौँ ।”
एकै प्रकृतिको काम गर्दा महिलाहरूले कम ज्याला पाउनुले उनीहरूको आर्थिक अधिकार खुम्चिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का प्रमुख मोहनदेव जोशीले बताए ।
कोभिड–१९ को चेन ब्रेकका लागि जिल्लाभर निषेध आदेश जारी
जिल्लामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दर बढेर गएपछि जोखिम नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन १६ गतेदेखि जिल्लाभर पूर्ण रूपमा निषेध आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल…
०७८ साउन १५ गते	झापा
कास्कीमा खोप केन्दको अनुगमन : स्वास्थ्य मापदण्डको पालना छैन !
पोखरा महानगरपालिका–८ बस्ने ५८ वर्षीया नरदेवी थकाली चर्को घाममा खोपको प्रतिक्षामा रहेकी थिइन् । उमेर समूहका हिसाबमा यसअघि नै खोप लगाइसक्नुपर्ने भएपनि बेखबर रहेकै कारण अघिल्लो चरणमा छुटेपछि साउन १४…
०७८ साउन १४ गते	कास्की
साउन १४ गते २ हजार ३ सय ३५ जनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६ लाख ९० हजार ६ सय ४२ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ…
०७८ साउन १४ गते	काठमाडौँ
इन्सेकद्वारा खोपकेन्द्र अनुगमन- भीडभाडले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम, लाइनमा बसेपनि खोप लगाउन नै नपाइने चिन्ता !
साउन १४ गते विहिबार । मध्यान्हको १२ बजे । फुङलिङ नगरपालिका–५ स्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनमा कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लगाउने नागरिकहरूको भीड । वीरेन्द्रचोकदेखि खोप केन्द्रसम्म नागरिकहरूको दुई ओटा लाइन…
०७८ साउन १४ गते	ताप्लेजुङ
१६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा गोदावरी नगरपालिका–६, टिकाभैरब बस्ने ३६ वर्षीय मनिस नगरकोटीलाई प्रहरीले ०७८ साउन ११ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई काठमाडौँको गैरीधाराबाट ललाईफकाई ०७८ असार…
०७८ साउन १४ गते	ललितपुर